Rank Zimbabwe - Directory - Zimbabwe | Easy Price Book Zimbabwe, better products ... better prices !
About Rank Zimbabwe ...
Rank Zimbabwe is the largest stationery manufacturer and distributor in Zimbabwe and your one-stop shop for stationery and accessories.
Rank Zimbabwe opened its doors in 1981 and has serviced Zimbabwe´s stationery requirements since then. The focus on stationery and related products is in line with Rank Zimbabwe's key competitive advantages: a local company, trusted brand name and quality products.
Rank Zimbabwe has long standing relationships with nearly all primary and secondary educational institutions in Zimbabwe and has organised a number of donation drives providing schools with essential educational supplies and sponsoring prizes and awards.
The majority of products are under Rank Zimbabwe´s 3 in-house brands – MERIT, KIAN and LOTUS.
Rank Zimbabwe has a range of over 750 products which include:
• Stationary - books, pencils, bond paper, maths sets, calculators, pens, markers, files, etc
• Office Furniture and Equipment - desks, chairs, shredders and whiteboards, etc
Rank Zimbabwe Contact Details:
Rank Zimbabwe business areas: